မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-03 > ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား
Sind Sie ein guter Kommunikator? Wir kommunizieren nicht nur durch das, was wir sagen oder schreiben, sondern auch mit Signalen, die wir bewusst oder unbewusst geben. Unsere Körpersprache kommuniziert mit anderen Menschen und sendet zusätzliche Informationen zu dem einfachen gesprochenen Wort. Zum Beispiel kann jemand, der an einem Vorstellungsgespräch teilnimmt, seinem potenziellen Arbeitgeber sagen, er fühle sich sehr wohl, aber seine geballten Hände und das Zappeln auf dem Stuhl vermitteln etwas anderes. Eine Person kann ein Interesse an dem vortäuschen, was eine andere Person sagt, aber ihr ständiger Mangel an Blickkontakt verrät das Spiel. Interessanterweise beschreibt der Apostel Paulus, dass jeder von uns ein Teil des Leibes Christi ist: «Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied» (1. ကောရိန္သု ၁2,27).
မေးခွန်းပေါ်လာသည်မှာသင်သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အဖွဲ့ ၀ င်အနေဖြင့်မည်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုသနည်း။ သင်သည်ကောင်းသော၊ အပြုသဘောဆောင်ပြီးအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အရာများစွာကိုပြောကောင်းပြောမည်၊ ရေးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပြုမူပုံသည်များစွာပြောရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝပုံသဏ္ာန်သည်သင်၏တန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်များအကြောင်းအသံကျယ်ကျယ်နှင့်ရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်သည်။ သင်၏သဘောထားကသင်ဝန်းကျင်ရှိသူများအတွက်သင်ထုတ်ဖော်ပြသထားသောစစ်မှန်သောသတင်းကိုဖော်ပြသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ၊ ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်အသင်းတော်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုနွေးထွေးကြင်နာစွာလက်ခံတတ်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးအရူးဖြစ်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုငယ် မှလွဲ၍ မည်သူကိုမဆိုသတိမထားမိပါသလော။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားများသည်လေ့လာသူကမ္ဘာနှင့်စကား ပြော၍ ဆက်သွယ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကသူတို့ကိုငြင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏စကားများသည်သူတို့၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရပ်သွားနိုင်သည်။
«Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele» (1. ကောရိန္သု ၁2,12-14) ။
သင်၏ပါးစပ်ထဲမှစကားလုံးများသည်လွယ်လွယ်ကူကူထွက်ပေါ်လာပြီးသင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏စိတ်သဘောထားများကထောက်ခံမှုမရသည့်အခါစျေးပေါသည်။ စကားပြောသောဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ သင်နေထိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့်အခါလူတို့သည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယေရှုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ လူတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ သင်၏ပြောဆိုမှုအားလုံးအတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားဖြစ်နိုင်ပါစေ။